कति समय हामी उपस्थिति तिर्न के! यो ठूलो ध्यान र हेरविचार आवश्यक छ। यो हाम्रो कपाल को विशेष गरी साँचो, अर्थात् छ - Hairstyles! निरन्तर त्यहाँ अक्सर हामी लामो समय केश निर्णय गर्न सक्छन् लागि जस्तै, "लगाउन केही" को समस्या छ। यस्तो अवस्थामा, हामी राम्रो पुरानो स्पाइक को समर्थन छ। उसलाई आगोमा र पानी मा - र जहाँ सम्भव, तपाईं माथि हुनेछ। मुख्य कुरा हो - राम्ररी यसलाई के! मिति, स्पाइक को विशेष लोकप्रियता, छेउमा लट!
यो छ कि यो के जस्तो देखिन्छ हुनेछ - एक समस्या, तर यहाँ खातामा nuances केही लिन आवश्यक छ। त्यसपछि तपाईं तेजस्वी हेर्न निश्चित हुनेछु।
त्यसैले, पहिले तपाईँले आफ्नो कपाल अतिरिक्त मात्रा बढाउनका त्यसैले, शैंपू आफ्नो कपाल धुन गर्न आवश्यक छ। अर्को, तपाईं आफ्नो हेयर ड्रायर सुक्खामा आवश्यकता हो, तर कंघी। थप luxuriant कपाल हेर्न गर्न, यो जरा मा बाल उठाएर छ जो एक गोप्य, प्रयोग गर्नुहोस्। स्पाइक, एक पक्ष, विशेष गरी बाक्लो कपाल बालिका गर्न उपयुक्त गर्न लट, किनभने यो केश मा मुख्य कुरा हो - भोल्युम। कि पछि तपाईं एक ponytail मा बाल सङ्कलन र दुई बराबर भागमा तिनीहरूलाई विभाजन गर्न आवश्यक छ। अर्को, हामी Strand मा लिन र बारी मा पुच्छर को दोस्रो भाग पारी। लामो हामी अन्त पुग्न रूपमा यो कार्य दोहोरिन। कि पछि, उनको कपाल लाह समाधान।
को चुल्ठो सजावटी बाल क्लिप वा रबर ब्याण्ड आवश्यक पूरा गर्नुहोस्। यसलाई आफ्नो छवि वरिपरि स्त्रीत्व र कोमल दिनेछु जो टेप, बुना गर्न सकिन्छ। प्रकाश र रोमान्स आफ्नो बाल जारी केही किसिमहरु दिनेछु। तपाईं एक कर्लिंग फलाम प्रयोग दोब्र्याइएको एक बिट आवश्यक प्रभाव बृद्धि गर्न। बेवस्ताई एक चिन्ह, तर यो छैन - धेरै छाडा किसिमहरु रूपमा एक तत्व भनेर निर्णय गर्न सक्छ। आफ्नो छवि को किसिमहरु धन्यवाद प्रकाश र वायुमय हुनेछ। केश गर्न पिन पिन सक्नुहुन्छ मूर्तिको solemnity दिन।
अब तपाईं ठ्याक्कै बारेमा प्रश्न छैन स्पाइक चुल्ठो कसरी किनभने तपाईं जो तपाईं सफलता ग्यारेन्टी बुनाई ती रहस्य, थाहा छ, यसको पक्षमा।
यस्तो एउटा pigtail एक पैदल लागि पार्क मा जानुहोस्, र विशेष अवसरमा गर्न सक्नुहुन्छ। सामान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भूल छैन, धन्यवाद जो सामान्य चुल्ठो एक परिष्कृत केश बन्न सक्छ।
कुनै जरुरी बाल, छेउमा भन्दा स्पाइक, स्पाइक कसरी बुनाई गर्न - हरेक केटी, यो हामी शेयर मा छ प्रत्येक दिन को लागि एक विशाल भण्डार विकल्पहरू यस्तो Hairstyles मार्फत किनभने थाहा हुनुपर्छ। यसको पक्षमा spikelets बाहेक र सामान्य स्पाइक बुनाई गर्न सक्नुहुन्छ। Hairstyles प्रविधि पनि धेरै सजिलो छ। मुख्य कुरा हो - आफ्नो उपस्थिति अलि समय हाइलाइट छ, र तपाईं आफै पहिचान छैन!
तपाईं स्टक मा छ कि अब तपाईं irresistible गर्नेछ अर्को केश छ। सम्झना हामी तिनीहरूलाई मा परिवर्तित छ भनेर, बाल हामीलाई दिइएको छ असामान्य Hairstyles। यी यसको पक्ष लट मा एक स्पाइक र समावेश। कुनै आवश्यकता बिस्तारै यसलाई गर्न एक पेशेवर हुन।
तपाईं मात्र अभ्यास गर्न एक सानो समय चाहिन्छ र तपाईंले सधैं आफ्नो छवि विविधता आफ्नो बुनाई कौशल फाइदा लिन सक्छ। तपाईं सधैं साथ जान गर्नुपर्छ ponytail। केटी, स्त्री सुरुचिपूर्ण र आकर्षक र छेउमा लट मा मकै को कान हुनुपर्छ भनेर भूल छैन, यो तपाईं ग्यारेन्टी!
गितार मा सजिलो गीत: खेल्न सिक्न
खजाना के हो? म यसलाई पाउन सक्छन्?
सिक्ने विशेषताहरु: cuckoo cuckoo - यो अर्थ के हो?
हातमा मा warts कस्तो व्यवहार गर्न
एक कार्यालय कुर्सी कसरी चयन गर्न
बारी, इटाली, र आकर्षण समीक्षा